ကစီဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်အကြောင်း သင်သိပါသလား - Hello Sayarwon
ကစီဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်ဆိုတာ လူတိုင်းကြားဖူးနေကြ အာဟာရဓါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဓါတ်တွေက လူခန္ဓါကိုယ်အပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ လူအနည်းငယ်သာ မှန်မှန်ကန်ကန်သိကြပါတယ်။
ကစီဓါတ်ဆိုတာ သကြားဓါတ်တစ်မျိုး၊ နှစ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် မြောက်များစွာပါဝင်တဲ့ အစာအုပ်စုပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့သကြားဓါတ်နဲ့ ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ် ပါဝင်ပါတယ်။ သကြားဓါတ်တစ်မျိုးတည်းပါရင် ချိုတဲ့အရသာရှိပြီး ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်အရောကတော့ ကစီဓါတ်အရသာရှိပါတယ်။
နို့၊ အသီးဖျော်ရည်၊ ပျားရည်၊ အိမ်သုံးသကြား ဒါမှမဟုတ် သစ်သီးတွေကနေ ရိုးရိုးသကြားဓါတ်ရရှိနိုင်ပြီး ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်အရောကိုတော့ ပြောင်း၊နှံ နဲ့ ကစီဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအရွက်တွေကနေ ရနိုင်ပါတယ်။
ကစီဓါတ်က ခန္ဓါကိုယ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးလဲ။
လူတွေအစားစားပြီးတာနဲ့၊ ချေဖျက်နိုင်တဲ့ ရိုးရိုးသကြားတွေက ဂလူးကိုစ့်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး သွေးတွင်းအချိုဓါတ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ အလားတူပဲ အင်ဆူလင်လု့ိခေါ်တဲ့ ဟိုမုန်းတစ်မျိုးထွက်လာပြီး ဒီသကြားဓါတ်ဘယ်လောက်ကို သိမ်းထားမယ် ဘယ်လောက်ကို နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အသုံးပြုပြီး ပိုနေတဲ့ ဂလူးကိုစ့်တွေကတော့ ကလိုက်ကိုဂျင်အဖြစ်နဲ့ အသည်း၊ ကြွက်သားတွေမှ သိလှောင်ထားပါတယ်။ ပိုနေတာများလာရင်တော ဒါတွေက အဆီဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် သကြားနဲ့ ကစီဓါတ်စားတာများရင် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ သကြားဓါတ်က အမျိုးသားအတွက် ၂၅ ဂရမ်နဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် ၃၈ ဂရမ်သာ လိုပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်ဆိုတာက ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ် ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လူ့ခန္ဓါကိုယ်က အဲဒီကာဗိုဟိုဒြိတ်ကို ဘယ်အင်ဇိုင်းနဲ့မှ မချေဖျက်နိုင်ပါဘူး။
ရေမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ရေမှာ မပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ရေမှာ မပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေကို ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ပဲခြောက်များ၊ ဆန်လုံးညို၊ သစ်သီးအခွံနဲ့ အစေ့များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ ရရှိပါတယ်။ ရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေကိုတော့ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲသီး ပဲခြောက်များနှင့် မြင်းစားဂျုံ (oats) တို့မှ ရရှိပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်က ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ဘာလုပ်ပေးသလဲ။
အမျှင်ဓါတ် နှစ်မျိုးလုံးက ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုး တစ်မျိုးစီ ပေးပါတယ်။ ရေမှာ မပျော်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်က ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး အူကျွံနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
ရေမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ကလည်း ဝမ်းသွားတဲ့အခါ လွယ်ကူစေပြီး သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောနဲ့ သကြားဓါတ်တွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ၁၀၀၀ ကယ်လိုရီလောက် စားတိုင်း အမျှင်ဓါတ် ၁၄ ဂရမ် အနည်းဆုံး စားသင့်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် တစ်နေ့ကို အမျိုးသားများအတွက် ၃၈ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ၂၅ ဂရမ် စားသင့်ပါတယ်။ စားတဲ့အထဲမှာ ရေမှာပျော်ဝင်စေတဲ့ အမျှင်ဓါတ် ၅ – ၁၀ ဂရမ် အနည်းဆုံး ပါဝင်စေသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေအကြောင်း နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြောရရင်တော့ ကျန်းမာတဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုစနစ်တစ်ခုက သင့်ကို သင်မသောက်ချင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေစေနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Reference: Carbohydrates: Sugar, Starch, and Fiber. http://www.mynetdiary.com/carbs-in-weight-loss.html Accessed January 11, 2017
Understanding Carbohydrates and Fiber When You Have Diabetes. http://www.webmd.com/diabetes/guide/understanding-carbohydrates-fiber Accessed January 11, 2017
အစားအသောက်နဲ့ အလှကုန်တွေ ရက်လွန်မလွန် စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မယ့် အာရုံခံစက္ကူပြားငယ်